Ny Playbook fahazoana rohy | Martech Zone
Raha vantany vao mahatsapa ny olona sasany fa ny rohy amin'ny tranonkala ivelany dia mety hampiakatra ny laharan'ny Google anao, dia nipoaka ny indostrian'ny SEO. Tsena an'arivony tapitrisa dolara ary tsy voafehin'i Google haingana ny fanomezana valiny lehibe ho an'ny mpampiasa. Nivadika fifaninanana izay nandoa ny ankamaroan'ny backlinks. Soa ihany, ho an'ireo mpivarotra mendrika, ireto Ny mpisoloky SEO dia nijanona tamin'ny ankapobeny. Ny fanovana Google algorithm dia namaha rohy tsy dia napetraka ary nanomboka nanasazy ireo orinasa izay hitany aza izy ireo rohy tsy voajanahary.
Ny rohy napetraka miaraka amin'ny fikasana hanova na hanodinkodinana ny valin'ny karoka dia manitsakitsaka ny Torolàlana momba ny Webmaster an'ny Google.
Ary aza mino izay milaza fa afaka mividy atiny ianao misy rohy ary tsy manitsakitsaka ireo fepetra ireo izany. Raha ny hametraka an'io rohy io no tanjon'ny atiny novidiana, dia mbola manitsakitsaka ny Fepetran'ny serivisy Google ianao!
Ity infographic, Tactical Touchdowns - ny Playbook fahazoana ny rohy, dia infographic lehibe izay manoritsoritra ireo fanamby, torolàlana ary fotoana ahafahana manangana rohy voajanahary. Ny valiny, mazava ho azy, dia ny manadino rohy mihitsy ary mampifantoka ny ezaka ataonao amin'ny fampivelarana atiny tsy mampino.
Nozaraina ny atiny lehibe. Ny fizarana dia atao amin'ny tambajotra mifandraika. Mizara rohy mifandraika ny fizarana mifandraika. Rohy mitondra fiara mifandraika amin'izany.
Tags: rohy fanangananafahazoana rohyrohy-tranolaharana biolojikafikarohana biolojikaSearch MarketingSEO
8 Nov 2012 amin'ny 10:57 maraina
Fampiasana tsara ny terminology amin'ny baolina kitra mba hahitana ny hevitrao momba ny fomba tsara sy ratsy fananganana rohy amin'ny fomba tokana. Tsy mpankafy Peyton Manning (avy any New England) fa azoko tsara! Tiako indrindra ilay teboka momba ny "fanaparitahana ny baolina manodidina". Mba hanatsarana ny fahitana anao sy hahazoana rohy voajanahary dia mila mamokatra atiny vokatra amin'ny tranokala tsy anao ianao.
Mar 2, 2016 ao amin'ny 6: PM PM
Lohahevitra lehibe amin'ny fananganana rohy. Tena hampiasa an'io fomba io aho.